တာမွေရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ | iMyanmarHouse.com
သိန်း 2000 မှ သိန်း 4000 ထိ တာမွေမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
တာမွေမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
​ပြဥျထောငျအိမျ (နှဈထပျ) နှငျ့ မွေ ရောငျးရနျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7848651 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7848612 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မတ်ေတာညှနျ့ လမျးကယျြလမျးသနျ့ မွကှေကျ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7735941 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တာမှေ လမျးကယျြလမျးသနျ့ မွကှေကျ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7735907 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တာမှမွေို့နယျ ကြောကျမွောငျးတှငျ မွကှေကျအမွနျရောငျးမညျ။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8099779 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေအကျယ် (30×50) မြေကွက်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7989319 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7714123 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7705095 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်